Showing १४१-१५० of ६५२ items.
निर्देशकसँग सुत्दैमा फिल्म पाइदैन
बलिउड अभिनेत्री रिया सेनले निर्देशकसँग सुत्दैमा फिल्म पाउन नसकिने बताएकी छिन् । एक साताअघि निर्मात्री एकता कपुरले कतिपय हिरोइनले फिल्ममा काम पाउनका लागि निर्देशकको ओछ्यान तताउने गरेको टिप्पणी गरेकी थिइन् । एक अंग्रेजी पत्रिकासँग कुरा गर्दै रियाले आफु अहिलेसम्म यौन दुब्र्यबहारको शिकार नभएको भन्दै निर्देशकसँग सुत्दैमा फिल्म पाउने सम्भावना नरहेको बताएकी हुन् । ‘हरेकको आ-आफ्नै सोच हुन्छ । सफलता त्यति सजिलै पाइदैन । निर्देशकसँग सुत्दैमा फिल्म पाइन्छ भन्नु गलत हो,’ उनले भनिन् । रियाकी आमा मुनमुन सेन र हजुरआमा सुचित्रा सेन बलिउड एवं बंगाली सिनेमाका प्रसिद्ध नायिका हुन् । रियालाई लाग्छ, गैरफिल्म पर
भिडियो मार्फत भ्रुणको वेदना, ‘नमार मलाई’ (भिडियाे सहित)
एउटा किशोरी, जो विद्यालयमा पढ्दै छे । उनी गर्भवती बन्छे । कुमारी आमा हाम्रो समाजमा स्विकार्य छैन । विद्यमान सामाजिक प्रचलनको कारण गर्भमै भ्रुण हत्या गर्नुको विकल्प हुँदैन । तर, भ्रुणको वेदना कसेले सुन्ने ? लघु गीतिकथा मार्फत यस्तै वेदाना पोखिएको छ, भ्रुणहत्या सम्बन्धी । यसमा कुमारी अवस्थामै गर्भवती भएकी किशोरीको गर्भमा रहेका भु्रणको बाँच्ने चाहनालाई व्यक्त गरिएको छ । गीतले भन्छ, ‘नमार मलाई, नफाल मलाई ।’ गीत प्रेगिशा पौडेलले गाएकी हुन् । प्रेगिशा आफै १३ बषिर्य किशोरी हुन् । निशान घिमिरेले निर्देशन गरेको भिडियोमा सृष्टि खड्का कुमारी आमा बनेकी छिन् । अर्जुन आचार्य तथा सपना थापाले पनि अभिनय गरेक
वरुण धवनले विहे गर्ने पक्कापक्की भएकै हो ?
बलिउडमा लभ, रोमान्स, डेट र ब्रेकअपको चक्र घुमिरहन्छ । कुन सेलिब्रेटी कोसाग डेट गरिरहेका छन् भन्ने कुरा मिडियाको मसला बन्छ । सेलिब्रेटीको लभ लाइफबारे अक्सर चासो राखिन्छ । उनीहरुको डेट र रोमान्सको चियोचर्चा गरिन्छ । यस्तो पृष्टभूमीमा आफ्नो प्रेम सम्बन्धलाई गोप्य राख्नु निकै गाह्रो काम हो । यस्तै गाह्रो काम गरेका छन्, वरुण धवन । पछिल्लो छिमकलका जल्दाबल्दा अभिनेता वरुण प्रेम सम्बन्धमा रहेको खुलासा त्यसबेला मात्र भयो, जब उनको बिहेको कुरा आयो । त्यसो त बलिउडमा रिलेसनमा भएदेखि नै आफ्नो सम्बन्धलाई सार्वजनिक गर्न हतारिनेहरु कम छैन । त्यही कति चाहि यस्ता सम्बन्धलाई त्यसबेलासम्म गोप्य राख्छन्, जब बिहेक
‘नेप्टे’को क्लब गीतमा रोहित र छुल्ठिमको दमदार नृत्य
नेपाली चलचित्र ‘नेप्टे’को ‘दिल रानी’ बोलको क्लब गीत रिलीज भएको छ। भिडियोमा नायक रोहित रुम्बा र नायिका छुल्ठिम गुरुङ्गको नृत्य हेर्न सकिन्छ। गीतमा सन्तोष राजको संगीत रतथा उदित नारायण झा र सेलिना कुँवरको स्वर सुन्न सकिन्छ। गीतमा यमनाथ मैनालीका शब्द छन् भने कबिराज गहतराज कोरियोग्राफर हुन्। दयाहाङ राई, छुल्ठिम गुरुङ, रोहित रुम्बा, वुद्दि तामाङ, पुर्णिमा लामा, प्रनिशा सिलवाल, ए गुरुङ लगायतका कलाकारहरुको अभिनय रहेको चलचित्रका निर्देशक देव कुमार श्रेष्ठ हुन्। किरण माइकलको पटकथा एंव संवाद रहेको फिल्ममा रोहित आँफैले कथा लेखेका छन्। चैत ३० गतेबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको कलाकार रोहित रुम्बाद्वारा निर्मित
प्रकाशित मितिः फाल्गुन ११, २०७४
“रुपै मोहनी” ले पायो करोड भ्युअर
मह जोडीको निर्माणमा बनेको चलचित्र ‘शत्रु गते’ यतिबेला चर्चामा रहेको चलचित्र हो । । त्यसमा पनि ‘रुपै मोहनी नारन रुपै मोहनी’ र पिरतीको बर्काे बोलको गीतले चलचित्रलाई झनै लाईमलाईटमा ल्याएको छ । यसबीचमा निकै रुचाईएको ‘रुपै मोहनी नारन रुपै मोहनी’ गीतले युट्युवमा एक करोड भ्युअर पाउँन सफल भएको छ । टंक बुढाथोकी र मिना निरौलाको आवाजमा रहेको उक्त गीतमा टंक बुढाथोकीको संगित र लोकराज अधिकारीको शब्द रहेको छ । चर्चा कमाईरहेको बेला गीतले चोरीको आरोपसमेत सहनु प¥यो । बरिष्ठ गायक कुमार बस्नेतको “रौसी खान जाम” गीतसंग मुखडाको केही नोट मिल्न गएपछि गीत चोरीको आरोप लागेको थियो । तथापी गीत निकै लोकप्रिय बन्यो । पुष
सारुखको नायिका ४५ को उमेरमा बनिन् टपलेस
बलिउड अभिनेत्री , मोडल तथा टिभी स्टार मंदिरा बेदी पर्दामा ९० को दशकदेखि सक्रिय छिन् । ४५ बर्षको उमेरमा उनको सुन्दरता , फिटनेश र सक्रियता युवायुवतीहरुका लागि प्रेरणा नै बन्ने गरेको छ । एक सन्तानकी आमासमेत रहेकी मंदिराले हालै सामाजिक सञ्जालमा टपलेस फोटो सेयर गरिन् । उनको उक्त तस्बिरको यति चर्चा भयो की हरकोहीबाट प्रशंसा मिलिरहेको छ कारण ४५ को उमेरमा पनि उनको फिटनेस निकै लोभलाग्दो रहेको छ । कहिले बिकिनी तथा कहिले हट पहिरनमा आफनो एब्स देखाउँदै तस्बिर सेयर गर्ने गरेकी मंदिराको केही दिन अगाडी मात्र पनि साडीमा पूसअप गरिरहेको भिडियो भाईरल बनेको थियो । सारुख , बबी देओल लगायतका नायकहरुसंग पर्दामा काम गर
दुई वर्षा, जो तौल घटाउन लागिपरेका छन्
नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा २ वर्षा निकै चर्चामा छन् । दुबै वर्षामा को कति सफल भन्ने बिषयमा अहिले चर्चा नगरौं । तर, यी दुई यतिबेला एउटै काममा फरक फरक स्थानमा लागिपरेका छन् । नायिका वर्षा राउत केहि समयदेखि अष्ट्रेलियामा छिन् । अष्ट्रेलियामा रहेकी वर्षा होलीपछि मात्र नेपाल आउनेछिन् । उनले अष्ट्रेलिया पुगेर १० केजी तौल घटाउने चर्चा पनि भयो । तर, वर्षाले अहिलेसम्म आफूले ४ केजी मात्र तौल घटाउन सकेको बताएकी छिन् । तर, बाँकी कसरत नेपालमा आएर पनि गर्ने उनले बताइन् । धेरैले मोटी भनेपछि वर्षा अहिले तौल घटाउन लागिपरेकी छिन् । उनी, यसमा गम्भीर पनि देखिएकी छिन् । यता, नायिका वर्षा सिवाकोटी पनि केही स
छोरीको ‘हट’ फोटोबाट सञ्जय दत्त रुष्ट
बलिउड अभिनेता सञ्जय दत्तकी छोरी त्रिशाला दत्त ठूली भइसके पनि फिल्ममा आउने सुरसार गरेकी छैनन् । यद्यपी उनी सामाजिक सञ्जालमा भने निकै सक्रिय छिन् । त्रिशाला प्राय इन्स्टाग्राममा आफ्नो ‘हट’ तस्वीरहरु सेयर गरिरहन्छिन् । पछिल्लो समय उनका हट तस्वीरहरुल भारतीय मिडियामा राम्रै स्थान पाइरहेका छन् । तर, यसलाई लिएर त्रिशालाका बाबु सञ्जय दत्त भने असन्तुष्ट बनेको बुझिएको छ । हालै मात्र त्रिशालाले आफ्नो एउटा साधारण तस्वीर सेयर गरिन् र बाबुलाई सम्बोधन गर्दै लेखिन्, ‘पिताजी यो हो मेरो एउटा नर्मल तस्वीर । अब त रिसाउनुहुन्न होला है ।’ यसैबाट प्रष्ट हुन्छ कि सञ्जय दत्तले छोरीलाई उत्ताउला फोटो नहाल्न चेतावनी द
झनै बोल्ड अवतारमा उर्वशी
सन् २०१३ मा सनी देओलको मुख्य भूमिका रहेको फिल्म ‘सिंह साहाब दि ग्रेट’ मार्फत बलिउडमा डेब्यु गरेकी उर्वशी रौतेलाले खासै चर्चा पाइनन् । उनि बलिउडमा डेब्यु त भइन तर चर्चा कम हुदा फिल्मी भाषामा भनीए जस्तो धमाकेदार इन्ट्री भएन। तर पछिल्ला दिनमा उनि फिल्म ‘हेट स्टोरी’ का कारण चर्चामा छिन। फिल्मको ट्रेलरमा बोल्ड देखिएकी उर्वशी सोहि फिल्मको गीतमा झनै बोल्ड अवतारमा प्रस्तुत भएकी छिन। फिल्ममा उनिसंगै इहाना ढिल्लोन , करण वाही , भिभान भटेना , गुलसन ग्रोभर लगायतको अभिनय छ। विशाल पन्ड्याको निर्देशनमा तयार भएको यो फिल्म मार्च ९ मा रिलिज हुँदैछ।
नायिका शिल्पा पोखरेल आफनो करियर र फिल्म भन्दा पनि निर्माता छबीराज ओझासंगको प्रेम र बिवाहको कारणले चर्चामा आउँने गर्छिन् । उनको निर्माणमा बनेको पहिलो चलचित्र ‘मंलगम’ रिलिजको संघारमा आईपुग्दा उनको र छबीको बिवाहको खबरले पनि स्थान पाईरहेको छ । मंगलमको प्रमोसनमा दौडिरहेकी शिल्पा भने जति बेला पनि छबीराजसंगको बिवाहको प्रश्नले हैरान भएपछि उनले छबीसंग एकसाथ अन्तरवार्ता दिन नै अस्वीकार गर्दे आईरहेको खबरले मिडिया तातेको छ । शिल्पाले प्रमोसनमा मंगलमको भन्दा बिहेको चर्चा भएपछि यस्तो गरेको बताईन्छ । लामो समय देखि प्रेममा रहेका छबी र शिल्पाको बिहे हेर्न सबै आतुर रहेको बेला यो प्रश्नले उनीहरु घेरिनु स्वभाविक